Gelatin la cuni karo oo ku jira xirmada sanduuqa: 500g / sanduuq
300 ubaxyada gelatin la cuni karo oo leh nafaqo sare
Faaruq Gaduud adag oo Gelatin ah
Kubad faneed madadaalo
Raac horumarka cagaaran oo waara
Shirkad soo saareysa alaabada dabiiciga ah oo dhan, Gelken waxay leedahay masuuliyad gaar ah ilaalinta deegaanka iyo ilaalinta cimilada. Yaraynta isticmaalka tamarta iyo xoojinta ilaalinta cimilada ayaa ah udub dhexaadka aragtideena su ...
Waa maxay gelatin caleen sideese loo isticmaalaa?
Caleenta gelatin (go'yaasha gelatin) waa khafiif, jajabnaan hufan, oo badanaa lagu heli karo saddex qeexitaan, 5 garaam, 3.33 garaam iyo 2.5 garaam. Waa colloid (coagulant) laga soo saaray unugyada isku xira xoolaha. Qaybta ugu weyn waa ...
Collagen Peptides Wixii Wadajirka ah
Marcus mendzler oo ahaa xirfadle reer Jarmal ah oo ku tartami jiray kubada tennis-ka ayaa ku guuleystey horyaalnimada tennis-ka caalamiga. Markii uu ka fadhiistay ciyaaraha isboortiga, wuxuu noqday tababare tennis. Isticmaalkani wuxuu dhaawacay laabatooyinkiisa maxaa yeelay wali wuxuu ku ciyaaraa gudaha iyo ...
Qaadashada borotiin tayo sare leh waa hab muhiim ah oo lagu hagaajiyo isdifaacida is-aqoonsiga.
Difaaca aadanaha wuxuu xiriir dhow la leeyahay cuntada. Dadka had iyo jeer hargab si fudud ku qabsada, badankood waxay la xiriiraan difaac hooseeya. Nafaqooyinka ugu muhiimsan ee loo baahan yahay dhismaha habka difaaca jirka aadanaha waxaa ka mid ah borotiinka, fiitamiinnada iyo macdanta. Tan ...
Sidee loo kala saaraa pectin iyo gelatin?
Labada pectin iyo gelatin labadaba waxaa loo isticmaali karaa in lagu dhuubo, lagu jabiyo oo lagu hagaajiyo cunnooyinka qaarkood, laakiin waxaa jira xoogaa kala duwanaan muhiim ah oo u dhexeeya labadan. Marka laga hadlayo ilaha, pectin waa karbohaydrayt ka yimaada dhir, badiyaa miro. Waxaa la helay i ...
Sheekada taariikhda ee kaabsoosha Gelatin
Marka ugu horeysa, dhamaanteen waan ognahay in daroogadu ay adagtahay in la liqo, badiyaa waxaa weheliya ur aan fiicnayn ama dhadhan qadhaadh Dad badan ayaa inta badan ka cagajiida in ay raacaan tilmaamaha dhakhaatiirtooda ee ah in ay daroogada qaataan maxaa yeelay daroogadu waa qadhaadh ...
Cun caafimaad leh: Collagen
Collagen peptide, oo sidoo kale loo yaqaan 'collagen' ee suuqa, wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa jirka bini'aadamka, isagoo ciyaaraya xubin taageerta, ilaalinta jirka iyo howlaha kale ee nafaqada iyo jir ahaaneed. Si kastaba ha noqotee, markii aan gaboobo, jidhku waa dabiici ...
Isbedelka horumarka ee gelatin
Gelatin waa borotiin leh astaamo jireed, kiimiko gaar ah iyo isku-noolaansho. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa daawada, cuntada, sawir qaadista, warshadaha iyo warshadaha kale.Gelatin alaabooyinka waxaa loo qaybiyaa gelatin caafimaad, gelatin la cuni karo, iyo ...
Ma lagu kalsoonaan karaa in lagu kariyo kolajka cunista?
Markii uu korayo da'da, waxa guud ahaan ka kooban kolajka ku jira jidhka bini'aadamka ayaa sii yaraanaya, waxaana sii muuqanaya maqaar qalalan, qallafsan oo dabacsan, gaar ahaan dumarka, dhibaatooyinka maqaarka maqaarka ee ay sababto luminta kolajka ayaa sameeya barar fara badan. ..
Kalluumeysiga Kalluunka ee Gelken
Xogta ayaa muujineysa in inta udhaxeysa 2018 iyo 2020, iibinta alaabada cusub ee loo yaqaan 'collagen peptide' ee laga soo saaray kalluunka duurjoogta ah ay kordheen 70%. Baahida suuqa ee kalluunka loo yaqaan 'peptides collagen' waa iska cadahay. Isla mar ahaantaana, macaamiisha waa lacag ...
Gelken Gelatin wuxuu ku takhasusay R&D, wax soo saarka iyo suuqgeynta gelatin iyo kolajka biyaha ku shaqeeya. Qadka alaabtu wuxuu daboolayaa in ka badan 10 nooc sida gelatin la cuni karo, gelatin daawo, gelatin warshadeed, xaashi gelatin ah iyo kolajiin biyo leh